Tolotra faran'ny herinandro any Lisbonne - Flight plus hotely amin'ny vidiny manokana | Vaovao momba ny dia
Un faran'ny herinandro any Lisbonne vaovao tsara foana izany. Ambonin'izany rehetra izany, rehefa miresaka momba ny vidiny mihidy sy ara-toekarena izay misy ny sidina sy ny hotely isika. Ny renivohitr'i Portugal dia miakanjo hatrany mba hitsena ny fizahan-tany izay avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao.
Noho izany, na dia efa teo aza ianao indraindray, dia fotoana mety foana ny famerenana. Satria hahita hetsika vaovao ianao, miaraka amin'ny zorony izay tsy manam-potoana hitsidihana anao sy izany rehetra izany, satria vidiny ambany be lavitra ilay azonao eritreretina. Mazava ho azy, miaraka amin'ny fampiononana rehetra ary manakaiky ny afovoany hatrany. Te hankafy tolotra toa izao ve ianao?
1 Flight + Hotel mandritra ny faran'ny herinandro any Lisbonne
2 Ahoana ny fanararaotana roa andro any Lisbonne?
Flight + Hotel mandritra ny faran'ny herinandro any Lisbonne
Marina fa raha te hahalala ny vazan'izao tontolo izao dia mila fotoana bebe kokoa noho ny faran'ny herinandro isika. Fa amin'ity tranga ity dia tsy azo ho very maina ihany koa ny tolotra toa io voalaza etsy ambony io. Satria afaka gaga ny vadinao ianao ary manome azy roa andro a toerana tokana sy tantaram-pitiavana. Ny marainan'ny zoma 17 mey izao, dia niainga ho any amin'ny nalehantsika izahay, hiverina ny alahady tolakandro.
Ny fiainganana dia avy any Madrid ary ny fahatongavana, mazava ho azy, dia ho ao amin'ny seranam-piaramanidina Humberto Delgado. Dia izay maharitra adiny iray sy sasany latsaka. Ka amin'ny indray mipy maso fotsiny dia efa mankafy toerana tsy manam-paharoa ianao. Raha miresaka roa andro monja isika dia tsy hitondra afa-tsy valizy an-tanana izay tafiditra ao anaty tapakila ihany koa, ka tsy hiandry ny fisavana.
Rehefa tonga any dia hijanona ao amin'ny hotely 'Hotely Turim Iberia', izay eo amin'ny telo kilometatra mahery miala eo afovoany no misy azy. Manakaiky ny tranombakoka 'Calouste Gulbenkian' izy io ary misy efitrano 86. Tokony holazaina fa manodidina ny 4 kilometatra ny seranam-piaramanidina, noho izany dia miresaka momba ny akaiky ihany koa izahay, ankoatry ny safidin'ny metro sy bus rehetra. Ka raha fintinina dia manana izany isika, ny fijanonana ao amin'ity hotely ity mandritra ny roa alina ary koa ny sidina dia mitentina 259 euro isan'olona. Toa hevitra tsara ve izany? Eny, efa azonao atao ny manao io famandrihana io Minitra farany.
Ahoana ny fanararaotana roa andro any Lisbonne?
Mazava ho azy, misy zoro marobe omen'ny toerana toa an'i Lisbony ho antsika. Noho izany, ny faran'ny herinandro any Lisbonne dia hamela anay ora maro handehanana eny amin'ny arabe. Afaka manomboka amin'ny antso isika Baixa manodidina izay iray amin'ireo afovoany indrindra. Ao no ahitanao ny Avenida de la Libertad na ny Plaza de los Restauradores ary eo akaikiny, ny Plaça do Rossio. ny Ascenseur Santa Justa Iray amin'ireo manintona hafa ihany koa izay tokony hodinihintsika koa. Fomba fampifandraisana ny faritra ambony sy ambany ny tanàna, na dia manintona mpizahatany aza izy io ankehitriny.
Ny hevi-dehibe iray hafa dia ny Barrio Alto. Avy any isika dia afaka mandinika ny fomba fijery mahafinaritra ho azontsika avy amin'ny Mirador de San Pedro. Amin'ity faritra ity dia manana ny fiangonana San Roque ihany koa isika, raha miala amin'ny arabe 'Rúa Pedro de Alcántara' isika. Ny Plaza del Comercio koa dia manana fomba fijery tsy mampino, amin'ny fotoana iray miresaka momba ny toerana iray hafa tandindona. ny Alfama manodidina Io koa dia teboka iray hafa izay tsy maintsy tsidihintsika amin'ny faran'ny herinandro any Lisbonne, ankoatry ny Fijery Santa Luzia.
Ny Castle of San Jorge, natsangana tamin'ny taonjato faha-XNUMX, dia manintona ny mason'ny mpizahatany rehetra. Manomboka eto dia azonao atao ny manohy midina amin'ny arabe mihorona ary ho hitanao ny Katedraly Lisbonne, nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Ny toerana manaraka dia Belém sy ny tilikambony. Na izany aza, aza adino ny Monasiteran'i Jerónimos, izay nambara ho toy ny vakoka manerantany miaraka amin'ny Tower.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » tolotra » Tolotra faran'ny herinandro any Lisbonne: Flight + hotely amin'ny vidiny manokana